” ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းမှ ဗာရန်း ကိုခေါ်ယူနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှု့ အရှိန် မြင့်တင်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် “ – Sports Soccer News
” ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းမှ ဗာရန်း ကိုခေါ်ယူနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှု့ အရှိန် မြင့်တင်လိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက် “
ယူနိုက်တက် အသင်း သည် အသင်းရဲ့ အားနည်းခဲ့တဲ့ နောက်တန်း ကို ပိုမိုတောင့်တင်းစေရန်. ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းမှ ဗာရန်း ကို ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားမှု့ အရှိန် မြင့်တင်လိုက်တယ်လို့ သိရဘာတယ် ။
ယူနိုက်တက် နောက်တန်းမှာ မက်ဂွားရား နဲ့ လင်ဒီလော့ သာ အဓိက အထိုင် ကစားသမား များအဖြစ် ကစားနေကြပြီး ဘိုင်ယီ နဲ့ တွမ်ဇီဘီ တို့ကတော့ အားကိုးအားထား မပြုနိုင်တာကြောင့်လည်းအခုလို ပထမတန်းအဆင့် နောက်တန်း ကစားသမား ကို ဖြည့်တင်းကာ အသင်း ကို အင်အားတောင့်တင်းစေရေး ဆိုးရှားက ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပေးဂိုးများခဲ့တဲ့ နောက်တန်း ပြသနာမှာ မက်ဂွားရား 1 ယောက် သာ ဒေါင်ဒေါင်မြည် ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ နောက်တန်း အတွက် လင်ဒီလော့ ထက် ပိုမို အားသာပြီး အရည်အချင်းမြင့်မားတဲ့ နောက်တန်း ကစားသမား မျိုးရှာဖွေ နေတဲ့ ယူနိုက်တက် အတွက် အသက် 27 နှစ်အရွယ် မှာ ကစားသမားဘဝ ရရှိန်ိုင်တဲ့ ဖလားအားလုံးရယူထားပြီးဖြစ်တဲ့ ရီးရဲမက်ဒရစ်လို အသင်းမှ ဗာရန်း ဟာ အံဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်နေတာက မဆန်းလှတာတော့သေချာပါတယ်။
ရီးရဲမက်ဒရစ် အသင်းသည် ရာမို့ ကို လက်လွှတ်ထားရပြီး ဖြစ်လို့ ဗာရန်းကို မဖြစ်မနေစာချူပ်သစ် တိုးမြှင့်မယ် ဆိုတာ က ဖြစ်နိုင်ချေဆန်ပေမယ့်လည်း လက်ရှိကမ်းလှမ်းထားတဲ့ 1 နှစ်လစာ7သန်းတန် စာချုပ်ကို ဗာရန်း ဖက်က တုံပြန်ချင်း မရှိတာကြောင့် ပီရက် အနေနဲ့ ရောင်းချတာကလွဲရင် တတ်နိုင်တာ မရှိန်ုင်ဘူးလို့ ရီးရဲမက်ဒရစ် ရဲ့ ရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။
ဗာရန်း ကို ယူနိုက်တက် အပြင် ချယ်ဆီး နဲ့ ပီအက်စ်ဂျီ အသင်းတို့က အလိုရှိနေပေမယ့် အမှန်တကယ် အေးဂျင့် နဲ့ ချိတ်ဆက် စကားပြောနေတာက ယူနိုက်တက်သာ ရှိနေပြီး သန်း 50 အထိ ပေးချေဖို့ အသင့် ရှိနေကြောင်း အချက်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ရီးရဲမက်ဒရစ် အနေနဲ့ သန်း 70 ဝန်းကျင်အထိအလိုရှိနေပေမယ့် စာချူပ်သက်တမ်း 1 နှစ်သာ ကျန်ရှိတော့တဲ့ ဗာရန်း ကို ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ သန်း 50 အထက်ပေးချေဖို့ကိုတော့ တွန့်ဆုတ်နေပါတယ်။
ဗာရန်း သည် ယူနိုက်တက် ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုရင် လက်ရှိ ရရှိနေတဲ့ 1 နှစ် 5.5 သန်း ရဲ့2 ဆ အဖြစ် 1 နှစ်12 သန်း ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး ယူနိုက်တက် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဟာ ကစားသမား ရဲ့အသက်အရွယ်အရ မျက်စိကျစရာဖြစ်နေတယ်လို့ စပိန်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ဗာရန်း ကို ဦးစားပေး ခေါ်ယူဘို့. သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ရီးရံမက်ဒရစ် ကနေ ကစားသမား ကိုယ်တိုင်က ထွက်ခွါချင်စိတ် ရှိမှသာ ခေါ်ယူဖို့ရာလွယ်ကူနိုင်ပြီး စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆို နိုင်ချေ ကိုလည်း ထည့်တွက်ထားဖို့လိုအပ်တာကြောင့် ကစားသမားဝယ်စာရင်းထဲမှာ တောရက်၊ကွန်ဒေး၊မီလန်ကိုဗစ်၊ရိုမဲရိုး တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထားရှိပါသေးတယ်။
သို့သော်လည် ဗာရန်း သည် ဆိုးရှားအလိုရှိတဲ့ ပထမဦးစားပေး နောက်တန်း ကစားသမား ဖြစ်ပြီး ဆန်ချို အပြောင်းရွှေ့နောက် ယူနိုက်တက် ဖက်က All In ပုံစံနဲ့ ဝင်ရောက်မယ့် ဒုတိယအပြောင်းရွှေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ယူနိုကျတကျ အသငျး သညျ အသငျးရဲ့ အားနညျးခဲ့တဲ့ နောကျတနျး ကို ပိုမိုတောငျ့တငျးစရေနျ. ရီးရဲမကျဒရဈ အသငျးမှ ဗာရနျး ကို ချေါယူဖို့ ကွိုးစားမှု့ အရှိနျ မွငျ့တငျလိုကျတယျလို့ သိရဘာတယျ ။
ယူနိုကျတကျ နောကျတနျးမှာ မကျဂှားရား နဲ့ လငျဒီလော့ သာ အဓိက အထိုငျ ကစားသမား မြားအဖွဈ ကစားနကွေပွီး ဘိုငျယီ နဲ့ တှမျဇီဘီ တို့ကတော့ အားကိုးအားထား မပွုနိုငျတာကွောငျ့လညျးအခုလို ပထမတနျးအဆငျ့ နောကျတနျး ကစားသမား ကို ဖွညျ့တငျးကာ အသငျး ကို အငျအားတောငျ့တငျးစရေေး ဆိုးရှားက ပွငျဆငျနတောဖွဈပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ ပေးဂိုးမြားခဲ့တဲ့ နောကျတနျး ပွသနာမှာ မကျဂှားရား 1 ယောကျ သာ ဒေါငျဒေါငျမွညျ ဖွဈနခေဲ့တဲ့ နောကျတနျး အတှကျ လငျဒီလော့ ထကျ ပိုမို အားသာပွီး အရညျအခငျြးမွငျ့မားတဲ့ နောကျတနျး ကစားသမား မြိုးရှာဖှေ နတေဲ့ ယူနိုကျတကျ အတှကျ အသကျ 27 နှဈအရှယျ မှာ ကစားသမားဘဝ ရရှိနျိုငျတဲ့ ဖလားအားလုံးရယူထားပွီးဖွဈတဲ့ ရီးရဲမကျဒရဈလို အသငျးမှ ဗာရနျး ဟာ အံဝငျဂှငျကြ ဖွဈနတောက မဆနျးလှတာတော့သခြောပါတယျ။
ရီးရဲမကျဒရဈ အသငျးသညျ ရာမို့ ကို လကျလှတျထားရပွီး ဖွဈလို့ ဗာရနျးကို မဖွဈမနစောခြူပျသဈ တိုးမွှငျ့မယျ ဆိုတာ က ဖွဈနိုငျခဆြေနျပမေယျ့လညျး လကျရှိကမျးလှမျးထားတဲ့ 1 နှဈလစာ7သနျးတနျ စာခြုပျကို ဗာရနျး ဖကျက တုံပွနျခငျြး မရှိတာကွောငျ့ ပီရကျ အနနေဲ့ ရောငျးခတြာကလှဲရငျ တတျနိုငျတာ မရှိနျုငျဘူးလို့ ရီးရဲမကျဒရဈ ရဲ့ ရငျးမွဈတှကေဆိုပါတယျ။
ဗာရနျး ကို ယူနိုကျတကျ အပွငျ ခယျြဆီး နဲ့ ပီအကျဈဂြီ အသငျးတို့က အလိုရှိနပေမေယျ့ အမှနျတကယျ အေးဂငျြ့ နဲ့ ခြိတျဆကျ စကားပွောနတောက ယူနိုကျတကျသာ ရှိနပွေီး သနျး 50 အထိ ပေးခဖြေို့ အသငျ့ ရှိနကွေောငျး အခကျြပွခဲ့ပွီး ဖွဈပါတယျ။ ရီးရဲမကျဒရဈ အနနေဲ့ သနျး 70 ဝနျးကငျြအထိအလိုရှိနပေမေယျ့ စာခြူပျသကျတမျး 1 နှဈသာ ကနျြရှိတော့တဲ့ ဗာရနျး ကို ယူနိုကျတကျ အနနေဲ့ သနျး 50 အထကျပေးခဖြေို့ကိုတော့ တှနျ့ဆုတျနပေါတယျ။
ဗာရနျး သညျ ယူနိုကျတကျ ကိုပွောငျးရှမေ့ယျဆိုရငျ လကျရှိ ရရှိနတေဲ့ 1 နှဈ 5.5 သနျး ရဲ့2 ဆ အဖွဈ 1 နှဈ12 သနျး ရရှိမှာ ဖွဈပွီး ယူနိုကျတကျ နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ဟာ ကစားသမား ရဲ့အသကျအရှယျအရ မကျြစိကစြရာဖွဈနတေယျလို့ စပိနျကလာတဲ့သတငျးတှကေဆိုပါတယျ။
ယူနိုကျတကျ အနနေဲ့ ဗာရနျး ကို ဦးစားပေး ချေါယူဘို့. သတျမှတျထားသျောလညျး ရီးရံမကျဒရဈ ကနေ ကစားသမား ကိုယျတိုငျက ထှကျခှါခငျြစိတျ ရှိမှသာ ချေါယူဖို့ရာလှယျကူနိုငျပွီး စာခြုပျသဈ ခြုပျဆို နိုငျခြေ ကိုလညျး ထညျ့တှကျထားဖို့လိုအပျတာကွောငျ့ ကစားသမားဝယျစာရငျးထဲမှာ တောရကျ၊ကှနျဒေး၊မီလနျကိုဗဈ၊ရိုမဲရိုး တို့ကိုလညျးဆကျလကျထားရှိပါသေးတယျ။
သို့သျောလညျ ဗာရနျး သညျ ဆိုးရှားအလိုရှိတဲ့ ပထမဦးစားပေး နောကျတနျး ကစားသမား ဖွဈပွီး ဆနျခြို အပွောငျးရှနေ့ောကျ ယူနိုကျတကျ ဖကျက All In ပုံစံနဲ့ ဝငျရောကျမယျ့ ဒုတိယအပွောငျးရှလေ့ညျးဖွဈပါတယျ။
တဈသနျးမှာ တဈကောငျတှဖေို့မလှယျတဲ့ ထူးခွားတဲ့အရောငျအသှေးနဲ့ တိရစ်ဆာနျလေးမြား
စိတျတိုငျးမကလြို့ ရကျ20 ကြျောနဲ့ နညျးပွရာထူးပွနျအပျတဲ့ ဒေါသအိုးကွီး ဂတျတူဆို